Mogadishu Journal » Sharuudaha shaqo siinta qofka oo lagu soo daray qabiilka uu ka soo jeedo
Sharuudaha shaqo siinta qofka oo lagu soo daray qabiilka uu ka soo jeedo
Mjournal :-Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Xaquuqul Insaanka Dowladda federaalka Soomaaliya oo boggeeda Internet-ka ku soo xayeysiisay jagooyin ka bannaan Guddiga Madaxa Banaan ee Xuquul Insaanka ayaa sharuudaha qofka shaqa doonka ee soo codsanaya jagooyinkaas ku dartay qabiilkiisa iyo jufadiisa hoose .
Foomka ay soo saartay Wasaraadda Haweenka ee looga baahan yahay inuu buuxiyo muwaadin walba oo soo codsanaya ilaa 19 jagooyin oo bannaan ayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo daneynaya shaqooyinkaasi islamarkaana soo kaamilay sharuudaha caadiga, ayaa la fajacay markii foomka sharuudaha lagu soo daray inay qasab tahay in aad soo sheegto qabiilka iyo jufada hoose sida aad ka arki karto website wasaaradda Haweenka ee foomka la soo dhigay. www.mwhrd.gov.so/foomka-arjiga/
Dad badan oo damacsanaa in ay jagooyinkaasi dalbadaan ayaa dib uga laabtay damacooda, kadib markii ay ku kalsoonaan waayeen nidaamka shaqo maadama ay ku xiran tahay in muwaadinka shaqada ku guuleysanayo qabiilka iyo jufo hoosaadka uu ka dhashay.
Baarlmaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sanadkii 2016 dii meel-mariyey sharciga Guddiga Madaxa Bannaan, iyadoo shaqooyinka Guddiga ay ka mid tahay Xukumida shaqsiyaadka geysta gabood-fallada ka dhanka ah xuquuqul Aadanaha Soomaaliya iyo sidoo kale difaacida, daba-galka, tixgelinta iyo horumarinta xaquuqul aadana Soomaaliya.
Muqdisho oo dib loo furay waddo mudo u xirneyd sababo la xiriira amniga